Frank Lampard oo ka hadlay isir faquuqii ay qaar ka mid ah taageerayaasha Chelsea u geysteen Tammy Abraham – Gool FM
Frank Lampard oo ka hadlay isir faquuqii ay qaar ka mid ah taageerayaasha Chelsea u geysteen Tammy Abraham
(London) 16 Agoosto 2019. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa muujiyay inuu aad uga xun yahay aflagaadadii ay qaar ka mid ah taageerayaasha u geysteen Tammy Abraham, kaddib guuldaradii ka soo gaartay Liverpool.
Qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Chelsea ayaa u geystay Tammy Abraham aflagaado iyo falal cunsurinimo ah, kaddib guuldaradii Chelsea ka soo gaartay Arbacadii finalka koobka UEFA Super Cup 2019.
21 jirkan ayaa ka qasaariyay kooxda Chelsea rigooradii 5-aad kulankii Liverpool, taasoo sababtay inuu la kulmo dhaleeceyn iyo aflagaado kaga timid tobaneeyo taageerayaal ah bartiisa rasmiga ah baraha bulshada ku xiriirto ee Twitter-ka.
Hadaba tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard oo arrintan ka hadlayay ayaa wuxuu yiri:
“Way cadahay in Tammy Abraham uu niyadjabsan yahay, ficilada qaar ee dadka ayaa ila muuqata inay ku qaldan yihiin, waana necbahay waxa ay sameenayaan”.
“Waxaan la hadlay Tammy, kaasoo leh shaqsiyad awood badan, waan jeclahay dabeecaddiisa iyo hamigiisa ah inuu dagaalamo ilaa dhamaadka. waa nin dhalinyaro ah mustaqbalkiisa kubadda cagta ayaa wali isaga horyaala, waxa ku dhacay waxay imtixaan u noqon doontaa shaqsiyadiisa”.